UJOHNNY BANANAS UYAVULA: 'KUBUHLUNGU UKUBUKELA' - IINDABA
UJohnny Bananas Uyavuleka: ‘Kubuhlungu Ukubukela’
UJohnny Bananas Devenanzio ebexhalabile kwihlabathi loCelomngeni kulo lonke eli xesha leSpies, Lies kunye neAllies xa kuthelekiswa nexesha lokugqibela, ikakhulu njengesiphumo sepodcast yakhe entsha eyaphula yonke isiqendu, Ukufa, iirhafu kunye neeBhanana. Iintshatsheli ezisixhenxe zithathe ikhefu ixesha elide ukusuka kumdlalo emva kwenzuzo kwi-Madness iyonke kwithuba elidlulileyo.
Ukongeza kwipodcast yakhe yobuqu kuluntu lweRinger, iiBhanana kungekudala kakhulu zavela kuScott Yager kunye noDerrick Kosinski's Challenge Mania podcast kwaye wathetha ngokubhekisele kwelona xesha litsha lonyaka. Bakhankanye ukuba amanqaku exesha langoku sele ehlile kwaye iiBhanana zingenile, Oko kuyibeka ngokufanelekileyo kwaye baqhula ukuba basegumbini lokuhlambela.
Inkwenkwezi yokwenyani yeHlabathi emva koko yajonga ukuba kutheni ekholelwa ukuba amanqaku ahlelelekile kwaye ucinga ntoni ziingxaki zeli xesha.
Landela Heavy kwi Umceli mngeni kwiphepha lewebhu likaFacebook Olona lwazi lutshanje luqhekezayo, amarhe kunye nezinto ezinomxholo!
Iibhanana zithe ucinga ukuba 'uMceli mngeni' wangoku uhambile kude neengcambu zawo ezilula kwaye uneeRokie ezininzi kakhulu
I-Bananas yayiqhula ngelithi wayeza kungena engxakini ngokuthetha oko kodwa wazisa uScott no-Derrick, 'Umceli mngeni' uhamba ngendlela yenyathi, umhlobo wam olungileyo. Yenza ukwehla okukhawulezayo kwicala lokuphela kwaye kubuhlungu kakhulu ukukujonga. Uye wakhankanya esinye sezona zinto zibalulekileyo zokuba umboniso ube nenzuzo kude kube ngoku kungumbono olula.
Kulula ngokwenene, wachaza. Ukhankanyile ukuza kuthi ga ngoku, i-cast iya kubonakala kwaye ifumane imigaqo-nkqubo yezemidlalo. Udityaniswe nembangi, une-ex, uyindoda elungileyo okanye intlonti ** okanye akunamsebenzi, kulula ukuyiqonda. Ifomathi yayilula nokuba wawungaze ubukele umboniso kwangoko kunokuba… Ndiva ngathi yinto abayenzileyo ngoku sele bemkile kuloo nto kwaye ngoku zonke izinto zitshintshile. Yonke imizuzwana emi-5, le yinto ejijekileyo, kwaye ikhankanyiwe ukuba banothuko oluncinci ngoku.
Uye wakhankanya phezulu kokujija, ngoku kukho ukungena kweerokki abalandeli abangazaziyo nangayiphi na indlela. Ndifumana into abazama ukuyenza, benza iinzame zokunyusa imodeli kwihlabathi liphela, wongeze, nangona kunjalo ndiva ukuba impazamo abayenzayo ifana, 'Abalandeli boCelomngeni, ukuthanda ... ngubani' Baye basamkela kwaye basibukela sikhula ngokweminyaka abadingi kudibana nabantu abatsha.
Uthe uyaqonda ukuba umboniso kufuneka ufumane abantu abatsha kumdlalo ukuze baphumelele ixesha elide kodwa ucinga ukuba lixabiso elininzi kakhulu. Iibhanana zongeze ukuba akunyanzelekanga ukuba athethe ngokugwenxa malunga nomboniso: andiyifuni ukuba ihambe, watsho. Ndijonga 'uMceli mngeni' njengekhaya kwaye njengabantwana bam abancinci. Ndichithe iminyaka elishumi enesiqingatha sobomi bam ndibeka ukubila nokubila kule nto kwaye ndifuna ukubona okanye akunangeniso.
Iibhanana zaye zaThetha no-Wes malunga noMdibaniso wamaGqala kunye noWes Ababiza ngokuba 'nguF ****** Idiots'
Emva kwesiqendu sesithathu sexesha, iiBhanana zamkela imbangi yakhe yangaphambili, uWes Bergmann, kuKufa, iirhafu kunye neBhanana podcast kwaye ezi-2 zikhankanye ixesha eliqhubekayo, umntu ngamnye ebiza amagqala emidlalo ekhuphisanayo. Iibhanana zacela uWes ukuba acinge ntoni ngokubhekisele kubuchwephesha bezilwanyana bokulandela iirokies kuphela kunye nokwenza umanyano lomkhosi.
U-Wes wazisa umlingane wakhe ukuba obu buchule bunengqiqo nangona kunjalo emva koko wagxotha i-vets. Ndiva ukuba bonke bazizidenge. Basebenza ngokujikeleza nembonakalo yobuso ngokungathi bayile into enye engazange yenziwe okanye isetyenziswe ngaphambili kunoko. Wongeze wathi, Nina f ****** zizidenge. Oko besizama ukukucacisela oku kule minyaka mihlanu idlulileyo yokuba yindlela ekufuneka yenziwe ngayo lo mdlalo. Kodwa wena u-narcissistic ego, umntu ofuna ukujonga-ingqalelo ufuna nje ukuphambuka kweso sicwangciso sokuzonwabisa.
U-Wes ukhankanye amagqala bekungafanelekanga ukuba athathe ixesha elide ukumisela obu buchule, yiyo le nto iinkwenkwezi ze-OG bezisenza kumaxesha onyaka amaninzi ngaphambili kunamagqala akhoyo ajoyina umdlalo. Iibhanana zivumile kwaye zikhankanyiwe akufuneki ziqhayise kakhulu malunga nobuchule bazo. Yenza izinto njengokuba ubulapha kanye ngaphambili, wakhankanya. Ndisoloko ndilikhankanya eli xesha. Xa usenza unikezelo oluchanekileyo okanye ubuchwephesha obuchanekileyo, uzibamba ngokwakho.
Umceli mngeni: Iintlola, amaxoki kunye neAllies zisasaza i-MTV ngolwesiThathu ngo-8 ebusuku. Amaxesha aseMpuma nasePacific.
Izigaba: Inetflix Tech-Iindaba Amazon-Prime
kutheni amasango mcfadden ashiye i-tng
lonke ixesha lasemelika 3 isiqendu 11 isiqendu esipheleleyo
Ngaba umsebenzi weposi usebenza ngosuku lwe-columbus
usuku lomdlalo omlwelwe kumagqala
mdala kangakanani u-willam belli